Coffe ရောင်းရန်ကား - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Gangting Dianche
စားနပ်ရိက္ခာ Truck ကား
Big စားနပ်ရိက္ခာ Truck ကား
မိုးသည်းထန်စွာစားနပ်ရိက္ခာ Truck ကား
မြင့်မားသောစားနပ်ရိက္ခာ Truck ကား
အသေးစားစားနပ်ရိက္ခာ Truck ကား
Ice Cream လှည်း
Big Ice Cream လှည်း
လက် Push ကို Ice Cream လှည်း
ဆိုင်ကယ် Ice Cream လှည်း
အသေးစား Ice Cream လှည်း
Big တော့အရောင်း Trailer
Smaill တော့အရောင်း Trailer
ပါဝါ RV နှင့်အတူ
ပါဝါ RV မပါဘဲ
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 9000-12500 / Piece
Min.Order အရေအတွက်: 1Piece / ပိုငျးပိုငျး
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 1000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
As for competitive selling prices, we believe that you will be searching far and wide for anything that can beat us. We will state with absolute certainty that for such excellent at such charges we are the lowest around for အလုပ်သဘောညစာ Truck ကား Moving , ထောင့်ကွက် Trailer , စားနပ်ရိက္ခာ Concession Trailer , We always concertrating on developing new creative product to meet request from our clients all over the world. Join us and let's make driving safer and funnier together!
အပြင်ဘက်တွင် Size ကို (မီလီမီတာ)
သံမဏိ + Counertop
လူပျို Burner (ဓာတ်ငွေ့)
စုပ်ခွက် (လျှပ်စစ် fauce + နှစ်ဆပုံး)
နေကာ, Lightbox, LED မီးမြှောင်
, လူကူးလမ်း, လမ်းများ, ညဥ့်စျေးကွက်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, ကျောင်းများ, စက်ရုံအလုပ်ရုံစည်ကားနေပါတယ်, ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု, အပန်းဖြေစင်တာများအတွက်လူနေအိမ်ဧရိယာများထားရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်, ဗီဒို, အမြန်ပေးပို့, ထီလက်မှတ်တွေ, အိမ်ခြံမြေနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်ပြပွဲဖော်ပြရန်သက်ဆိုင်သော။
9m2 ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်သိုလှောင်မှုအာကာသ, သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုနှင့်အနောက်တိုင်း loaded; ခေါက်ပြပွဲရပ်တည်ချက်, "0" အကွာအဝေးရောင်းချဖွင့်လှစ်။ တစ်ခုတည်းတွန်းအားပေးနှင့်အတူဖှငျ့နိုငျသောသံလမ်းနှင့်အတူမိုဘိုင်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းစင်ပေါ်၏5အလွှာ။
မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံကိုစတူဒီယို, အဆင်ပြေန်ဆောင်မှုများ, ဆံပင်လက်သည်း, ပညာရေးနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းတွေသက်ဆိုင်။
5, RV ။
ခရီးသွား, စခန်းသာယာလှပ, ဟိုတယ်နှင့်အခြားအပန်းဖြေစီမံကိန်းများကိုသက်ဆိုင်။
ဒါဟာတန်ခိုးမရှိနှင့်အတူငယ်တစ်ခု, နှစ်ခုဘီးသို့မဟုတ်လေးခုဘီးထွန်စက်သည်နှင့်ထုံးစံလုပ်နဲ့ multi-ရည်ရွယ်ချက်ရှိနိုင်ပါသည်။
လူနေမှုသို့မဟုတ်အတွက်ခရီးသွားလာမှုအတွက်ဘီးမော်တော်ယာဉ်, အထူးသဖြင့်အားလပ်ရက်များအတွက်, ထိုကုတင်နှင့်ချက်ပြုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများပါရှိသည်နှင့်တစ်ဦးကားဖြင့်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
တိုင်း client များသည်ပြီးနောက်-ရောင်းဝန်ဆောင်မှုဂရုစိုက်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နေသောခေါင်းစဉ်:
2. စက်ရုံတိုက်ရိုက်ပေးဝေ: ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပို့ဆောင်မှု။
3. စက်ဒုက္ခ get လျှင်အချိန်အတောအတွင်းကျနော်တို့ပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်သင့်ကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုပစ္စည်း, အရွယ်အစား, အရောင်, ဆေးသုတ်, လိုဂို, အတိုင်း, သင်တို့၏လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီမိုဘိုင်းထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
5. 100% ငွေပေးချေမှုရမည့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
သငျသညျအလီကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်မှတဆင့်ပေးဆောင်ခဲ့လျှင်ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ် T / T မှတဆင့်, သင်ပထမဦးဆုံးအလီဘာဘာမှပေးချေမည်, ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူသင်သည်ထိုသင်သည်သင်၏အီလက်ထရောနစ်စာချုပ်အပေါ်အတည်ပြုမှသာအခါ, အလီကိုအမှပေးချေမည် ကုန်ပစ္စည်းရတယ်, ဒါမှမဟုတ်အလီပြန်သင်ဖို့ပိုက်ဆံပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟူသောဂတိတော်သည်။ ထိုသူတို့ကအထက်ပြဿနာတွေကိုပိုပြီးအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့, သင့်နိုင်ငံအတွင်းရှိကောင်းတစ်ဦးဖြန့်ဖြူးဘို့ရှာကြသည်ကျနော်တို့ပြီးနောက်ဤနေရာတွင်စက်ကိုစမ်းသပ်မျှော်လင့်ပါတယ်ငြကောင်းတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုယူနိုင်ဘူး။
တစ်ဦးစားနပ်ရိက္ခာ Truck ကားတည်ဆောက်ခြင်းအနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်မှာအမြတ် Be မှ
လူမှုမီဒီယာစားနပ်ရိက္ခာ Truck ကားအောင်မြင်ရန်အတွက်ဒါအရေးကြီးလား?
ce ကော်ဖီလှည်း Trailer
ကော်ဖီလှည်း / ကော်ဖီဆိုင်ကယ်
ကော်ဖီ Kiosk အ
ကော်ဖီ Kiosk အ Trailer
ကော်ဖီဆိုင်ကို Mobile လှည်း
ရောင်းရန်ကော်ဖီဆိုင်ကို Mobile လှည်း
Ce နှင့်အတူကော်ဖီ Trailer
ကော်ဖီ Wending လှည်းရောင်းရန်
High Quality ကော်ဖီဆိုင်ကယ်
မိုဘိုင်းကော်ဖီလှည်း Kiosk အ
မိုဘိုင်းကော်ဖီစားနပ်ရိက္ခာ Truck ကား
အဆောက်အဦးအပြင်ကော်ဖီ Kiosk အ
သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ကော်ဖီ Dinning လှည်း
မိုဘိုင်း Gourmet မော်တော်ကား